Charles Dickens. Mamwe mabhuku mashoma anozivikanwa nemunyori wechiChirungu | Zvazvino Zvinyorwa
Sezvo munhu wese achiziva (kana achifanira) nhasi ndiyo iyo charles dickens rokuberekwa, quintessential English novelist uye mumwe weakanyanya uye akakosha mune zvinyorwa zvepasirese. Akazvarwa Kukadzi 7, 1812 kuPortsmouth uye mamwe emabasa ake ane mukurumbira ari David Copperfield, Oliver Twist, Rungano rweMaguta Maviri, Krisimasi nhau y Tariro huru. Asi zvakare ine zvimwe mabhuku mashoma anozivikanwa izvo zvandiri kuzoongorora. Izvi ndeizvi:
1.2 Mufambi Dickens
1.3 Dickens tsika
1.4 Nhoroondo dickens
1.5 Kutanga Dickens
Izvo zvaive pasina mubvunzo iyo anonzwisisa zvakanyanya muiti uye murondedzeri wezvezuva rake. Uye aive mudzidzisi mukuru uye akabudirira mukugadzira rondedzero yemhando, iyo yaakapawo kuseka uye kuseka, kuwedzera kune zvakanyanya unopinza mutsoropodzi kunzanga.
Akaratidzawo kufarira zvisinganzwisisike zviitiko, inoshamisa uye ine macabre poindi. Uye pasina kupokana basa rake rinozivikanwa inyaya yemweya. Saka kutanga kusarudzwa kwemabhuku asingazivikanwe, zita iri rinoenda.
mariri 13 yenyaya dzinozivikanwa dzechipoko yakanyorwa naDickens se Chipoko chiri mumba memwenga, Kutongwa kwemhondi, Iye chiratidzo, Krisimasi zvipoko, Muurayi Kaputeni uye chibvumirano naDhiyabhorosi, Kushanya kwemu testator o Imba inoshamiswa, pakati pevamwe
Yaiva mhedzisiro yeinenge gore rekufamba muItaly muna 1844. Dickens anofungidzirwa kuratidza kwete chete seti yenhoroondo uye zvinyorwa zvepamusoro, asi a kupora kunotonhorera yenzvimbo dzakashanyirwa.
Muna 1842 Charles Dickens nemukadzi wake vakatanga Britannia kuenda kuziva America. Rwendo, rwe mwedzi mitanhatu, akavatungamira ku Boston, New York y Washington, pakati pemamwe maguta.
Munyori akagadzira nhoroondo yakazara kuratidza nzanga mukuvandudza kwakazara kweayo maindasitiri, matare uye hutano zvimiro, uye zvichinongedzera kune ramangwana hegemony yenyika. Nekudaro, iyi rondedzero ine rupo kana ichisimbisa mativi ayo ayo ari nani achienzaniswa neEngland yenguva yayo. Asi zvakare tsoropodza zvinopesana nezvinhu chaizvo kufambira mberi kana kusaruramisira, senge uranda.
Masangano ese eruzhinji muUnited States anozivikanwa neruremekedzo rukuru. Vazhinji vedu vanogona kuve nekuvandudzika kukuru mune izvi, asi iri pamusoro peCustoms House iyo inofanira kutora muenzaniso mukuru kuti isanyanye kushungurudza uye kuvenga vatorwa. Kunyangwe kukara kwekushumira kwevakuru veFrance kutove kunoshoreka, varume vedu vanoratidza kushomeka uye kusaremekedza kushaya dzidzo, zvisingafadzi kune vese vanouya kwavari, vasina kukodzera nyika iyo inoisa izvi zvisingadzoreki mutts vega.
Pakusvika kwangu muUnited States, ndakashamiswa nomusiyano uyo ikoku kwakaitwa netsika dzavo uye nokuchengeta, tsika, uye kuseka kwakanaka kwaavo vakuru vaiva pabasa.
Yakanga yakabudirira zvikuru. Dickens akagadzira hunhu uhu yemagazini yako Gore rese Kutenderera. Mai Lirriper, panofa murume wavo azere nezvikwereti, vanovhura Imba yekugara pa81 Norfolk Street, London, kubhadhara avo vaakakwereta uye kutanga hupenyu hutsva. Uye ipapo vanoratidzira yakareba garari yezvokwadi dickensian mavaraKubva kuna chiremba akachenjera Goliati kusvika kuna Dr. Bernard, uyo anonyanya kubatsira kuzviuraya pamabiko emanheru.
Inowanzo ratidzwa se imwe yenhoroondo mbiri dzenhoroondo yakanyorwa naDickens, iri pamusoro pezvose rima melodrama ine mhosva uye zvakavanzika. Izvo zvinoitika pakati pa1775 na1780, zuva remhirizhonga yaGordon, inotsanangurwa mubasa. Iyo ine maviri eatinofarira madingindira aDickens: iyo mhosva yega and the mhirizhonga yeruzhinji.
Saka isu tine chikamu chimwe uko kukwidziridzwa kunokwidziridzwa umhondi yaRuben Haredale, rima zano rinobatanidza machinda Haredale naChester, vavengi vekusingaperi, iyo yakamisikidzwa uye isina kuchengetedzeka kudanana kana hunhu husinganzwisisike iyo inoshungurudza mufaro wemhuri yaBarnaby.
And the chikamu chechipiri enderera ne Mhirizhonga yaGordon, kumukira kwakasimudzwa naIshe Gordon vachipesana nemaBritish Katurike, ayo anosanganisira mhomho uye vanhu vakasiyana, kubva kwavari izvo zvinounza pfungwa dzakanakisa uye dzine hutsinye.
Iwo Mapepa eMudfog
Iwo magwaro akaunganidzwa muiri vhoriyamu (zvakare akataura kune dzimwewo nyaya dzekufarira, kuwedzera kuSosaiti yeanozivikanwa uye yekunyepedzera Mudfog taundi) yakatanga kuburitswa mu magazini Bentley's Miscellany pakati pa1837 na1939. Yaive a nguva yakakosha muhupenyu hwaDickens hwehupenyu nehunyanzvi, uyo achiri kusaina pasi pseudonym Boz, uye aive mupepeti waro. Mariri, munyori akamira kuve munyori wekutanga uye akatanga kunakidzwa nekuzivikanwa uye kubudirira. Aya magwaro dzakaburitswa sebhuku muna 1880, makore gumi mushure mekufa kwake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Charles Dickens. Mamwe mabhuku mashoma anozivikanwa nemunyori wechiChirungu
Ini ndanga ndisingazive nemabhuku aya aDickens, zvingave zvakanaka kuti uatarise.
Mabhuku akanakisa naPérez-Reverte